रमेश प्रसाई र कल्पना दाहालको सबैतिर बिहेको चर्चा चल्दा दो,होरीबाटै खोले बिहेको रह, स्य (भिडियो सहित ) – Ap Nepal
रमेश प्रसाई र कल्पना दाहालको सबैतिर बिहेको चर्चा चल्दा दो,होरीबाटै खोले बिहेको रह, स्य (भिडियो सहित )
काठमाडौ । कल्पना दाहाल र रमेश प्रसाईको दोहोरी नेपाली इतिहासमा सबैभन्दा धेरै हेरिएको लोक दोहोरि बनेको छ । लाईभ हेराईमा यसले रेकर्ड तोडेको थियो । इन्द्रेणी युबट्युव च्यानलबाट अपलोड गरिएको भिडियो अहिलेपनि सर्वाधिक कमेण्ट र हेरिएको भिडियोमा रेकर्डपनि कायम हुँदैछ ।
उनीहरुको टिकटक पनि सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएका छन् । रमेशसंग कल्पनाको विवाहलाई लिएर कल्पनाको आमाले पनि स्वीकृति दिएकी छन्,यो कुराले उनिहरुलाई माया गर्ने सबै निकै खुशी भएका छन । कल्पनाको रोजाई रमेश हुन् भने आफुलाई कुनै गुनासो नभएको उनको आमाको भनाई छ ।
उनीहरुको दोहोरी र टिकटक हेरेर वास्तविक जिवनमा पनि जोडी बन्न धेरैले सुझाव दिएका छन् । उनिहरुले हुक्का चिलिमले भन्ने दोहोरी गाएर सबको मन जितेका थिए ।
कल्पना र उनको प्रेमको बिषयमा उनकी आमालाई प्रश्न गर्दा निकै लाजाइन। हामीले कल्पना र रमेश को बिहे हुन्छ त् भनेर उनकी आमालाई सोध्दा मेरो तर्फबाट राजि छु अब कल्पना र रमेशले नै निर्णय गर्ने हो भन्दै उनकी आमाले शुभकामना समेत दिएकी छिन् ।
एता कल्पनाले पनि भाग्यमा लेखेको छ भने बिहे हुने समेत बताएकी छिन । कल्पनाले आफ्नो दाईलाई सम्झेर रुन पुगिन । उनकी आमा १२ दिन सम्म अस्पतालमा अन्तिम अबस्थाबाट पुनर्जन्म पाएर फर्केकी छिन् ।
उनका एक दाजु र एक भाईको निधन भर्खरै भएको छ । सारै नै पिडादायी अवस्थामा कल्पना रहेकी छिन् । यति पिडा भएरपनि कसरी हाँस्दैछिन् कल्पना । सुन्दा सबै भक्कानिन्छन् ।
हेरौ भिडियो नै…
Prevअञ्जली अधिकारी पुग्दा ग’ लबन्दी गीत गाएर छ’क्क परिन् अनिताले…हेर्नुहोस् (भि, डियो सहित)
Nextआजको राशिफलः बि.स.२०७७ साल मंसिर १७ गते बुधबार इश्वी सन २०२० डिसेम्बर २ तारीख
रमेश प्रसाई र नन्दा टिक-टकमा र’म्दै, हाल्ने बिति’क्कै भिडियो भाईरल, लाखौंले हेरे -हेर्नुहोस् (भिडियो सहित )
बलिउडलाई टक्कर दिने नेपालीको भिडियो ‘सिक्किम जाने रेल’ !-हेर्नुहोस (भिडियो सहित) (18815)
तपाँई बिहानै खाली पेटमा चिया पिउँ;नुहुन्छ ? एकपटक अवस्य पढ्नुहोस तपाँईलाई यस्तो हुनपनि सक्छ !… (6921)
७० बर्षका श्रीमान २० बर्षीय श्रीमतीको जोडी टिक-टकमा यसरी रम्दै सिरियलमा खेल्न अफर(भिडियो सहित) (6801)
६ बर्ष पहिले म,रेको मान्छेको चि,हान राति १२ बजे यसरी खनेका थिए, चि,हान खन्दाको दृश्य (भिडियो सहित) (6240)
रमेश प्रसाई रिसा,एपछि फकाउँदै उनकी पत्नी नन्दा [हेर्नुहोस् यो रमाइलो टिकटक भि’डियो] (5208)
तपाईंले चलाई रहेको सिमकार्ड कसको नाममा दर्ता छ ? आजै यसरी चेक गर्नुहोस् म (4865)